सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेटः ११ जनाको शव भेटियो, २० अझै बेपत्ता ! « MNTVONLINE.COM
सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेटः ११ जनाको शव भेटियो, २० अझै बेपत्ता !
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको बाहबिसेमा शनिबार राति गएको पहिरोमा पुरिएका थप दुईजनाको शव भेटिएको छ । योसँगै सो पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार पहिरोमा अझै २० जना हराइरहेका छन् । पहिरोले बाह्रबिसे नगरपालिका ७ को भिरखर्कका १० र नागपुजे गाउँका ८ घर पुरिएका छन् ।
पहिरोमा परी मृत्यु हुनेमा ९८ वर्षीया ट्याक्सी शेर्पा, ६२ वर्षीया भक्तिमाया श्रेष्ठ, ६० वर्षीया सर्किनी नेवार, ६० वर्षीया हिरामाया नेवार, ४२ वर्षीया ज्ञानीमाया प्रधान, र २५ वर्षीय कर्णबहादुर श्रेष्ठ छन् । त्यस्तै, ६५ वर्षीय धनलाल विक, २३ वर्षीया जुनु विक, २४ वर्षीय सुकलाल विक, आठ वर्षीय सन्देश विक र पाँच वर्षीया सरस्वती विकको पनि ज्यान गएको छ । हराएकाको खोजीमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासी लागिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेटः ९ जनाको शव भेटियो, २२ अझै बेपत्ता !
लुकाकु एक वर्षको लागि इन्टर मिलानमा अनुबन्धित